मलेसियामा एक नेपालीको को’रोनाले मृ’त्यु ! - Thulo khabar
मलेसियामा एक नेपालीको को’रोनाले मृ’त्यु !
क्वालालम्पुर : दिनेश खड्का खप्तडि, मलेसियामा एक नेपालीको कोरोना सक्र’मणको कारण मृ’त्यु भएको छ । धनुषा जिल्लाको जनकपुर १२ जनकपुरधाम घर भई मलेसियामा
कार्यरत शत्रुधन साहु कलवारको ४८ वर्षको उमेरमा मंगलवार विहान मृ’त्यु भएको छ । मलेसियाको कुम्पुलान जेविको एम एसडिएन विएचडिमा कार्यरत रहेका कलवारको सुगाईवुलो अस्पतालमा उपचारको क्रममा मृ’त्यु भएको हो ।
कलवार पाँच वर्ष अगाडि रोजगारीको लागि मलेसिया आएका थिए ।
थप समाचार : एजेन्सी – जापानले देशका १९ प्रान्तमा सङ्कटकालको समयावधि फेरि थप गर्ने निर्णय बुधबार गरेको छ । को’रोनाभा’इरसको महामा’री अझै फैलिएको र खतरा
अन्त्य नभएको निष्कर्ष निकाल्दै म्याद फेरि थप्ने निर्णय भएको सरकारी अधिकारीहरूले जानकारी दिएका छन् । यही सेप्टेम्बर ३० तारिखदेखि लागुहुने गरी सङ्क’टकालको समयावधि फेरि थप गरिएको हो । देशका कूल ४७ प्रान्तमध्ये २१ प्रान्तमा यही सेप्टेम्बर १२ देखि सङ्क’टकाल लागू भएको छ ।
मियागी र ओकायामा प्रान्तमा भने महामारी कम हुँदै गएको ठानेर अर्ध सङ्क’टकाल घोषणा गरिएको अधिकारीहरूले जनाएका छन् । त्यसैगरी अर्ध सङ्क’टकाल लगाइएका १२ मध्ये टोयामा, यामानाशी, एहिम, खोची, सागा र नागासाकी गरी ६ प्रान्तमा भने हालै अर्ध सङ्क’टकाल पनि हटाइएको छ ।
कोरो’नाभाइर’सको नयाँ नयाँ भेरि’यन्ट फैलिँदै गएपछि देशका धेरै ठाउँमा सङ्क’टकाललाई निरन्तरता दिनुपरेको अधिकारीहरूले जानकारी दिएका छन् । सङ्क’टकाल लागू गरिएको क्षेत्रमा अत्यावश्यक काम बाहेक अन्य अवस्थामा हिँडडुल गर्न प्रति’बन्ध लगाइएको छ ।
अत्यावश्यक कामका लागि पनि स्थानीय अधिकारीहरूलाई जानकारी दिएर वा अनुमति लिएर मात्रै हिँ’ड्न पाइने व्यवस्था गरिएको छ । अधिकांश पसल तथा कार्यालयहरू बन्द गरिएको छ भने भीडभाड गर्न नि’षेध गरिएको छ । सरकारको आदेश नमान्नेलाई कडा कारबाहीको चेतावनी पनि दिइएको छ ।